ဦးနှောက်နှင့် အာရုံကြောဆိုင်ရာ ဆေးပညာဌာန - Samitivej Hospital Bangkok Thailand - JCI Accredited World Class Hospital
ဦးနှောက်နှင့် အာရုံကြောဆိုင်ရာ ဆေးပညာဌာန
နေ့စဉ် (တစ်ပတ်လျှင် ၇ ရက်) - ၀၉:၀၀ - ၁၇:၀၀
၆၆ (၀) ၂၇၁၁-၈၄၉၁
ရှုပ်ထွေးလှတဲ့ ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာ ဆေးပညာကမ္ဘာနဲ့ ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာ ရောဂါများ၊ အခြေအနေများကို ကုသမှုတို့အတွက် အလုပ်တွင် နှစ်မြှုတ်လုပ်ကိုင်မှု၊ လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုနဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာသော အတွေ့အကြုံတို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အထူးကုသမားတော်ကြီးတွေနဲ့ ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြော ဆရာဝန်ကြီးများအားလုံးဟာ ဒီကိစ္စမှာ စံနမူနာထားစရာတွေ ဖြစ်တဲ့အပြင် လူ့ဦးနှောက်နဲ့ ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်တို့ရဲ့ အတွင်းပိုင်း အလုပ်လုပ်ပုံတို့ကို ကောင်းစွာ နားလည်ထားသူတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒီဌာနဟာ သူ့ရဲ့သီးသန့် ကျွမ်းကျင်သူများအဖွဲ့နဲ့အတူ Bangkok နဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အသိုင်းအဝိုင်းကို ထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့ JCI အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေ ပေးနေတာဟာဆိုရင် ဆယ်စုနှစ်များစွာ တိုင်ခဲ့ပါပြီ။
ရှုပ်ထွေးလှတဲ့ ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာ ဆေးပညာကမ္ဘာနဲ့ ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာ ရောဂါများ၊ အခြေအနေများကို ကုသမှုတို့အတွက် အလုပ်တွင် နှစ်မြှုတ်လုပ်ကိုင်မှု၊ လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုနဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာသော အတွေ့အကြုံတို့ကို လိုအပ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အထူးကုသမားတော်ကြီးတွေနဲ့ ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြော ဆရာဝန်ကြီးများအားလုံးဟာ ဒီကိစ္စမှာ စံနမူနာထားစရာတွေဖြစ်တဲ့အပြင် လူ့ဦးနှောက်နဲ့ ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်တို့ရဲ့ အတွင်းပိုင်း အလုပ်လုပ်ပုံတို့ကို ကောင်းစွာနားလည်ထားသူတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။
Samitivej Sukhumvit ဆေးရုံကြီးနဲ့ Samitivej Srinakarin ဆေးရုံကြီးနှစ်ခုလုံးက ဦးနှောက်နှင့် အာရုံကြောဆိုင်ရာ ဆေးပညာဌာနကို သူ့ရဲ့ အဆင့်မြင့်လေ့ကျင့်ထားတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေအပြင် နောက်ဆုံးပေါ် ဆေးပညာဆိုင်ရာနည်းပညာများ တပ်ဆင်ထားပါတယ်။
အာရုံကြောဆိုင်ရာ သိပ္ပံပညာဟာ အလျှင်အမြန်တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာတဲ့ နယ်ပယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးပေါ် ဆေးပညာအလားအလာတွေနဲ့ တိုးတက်လာတဲ့နေရာမှာ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ရှေ့တန်းက ရှိနေအောင် သေချာဆောင်ရွက်ထားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပစ္စည်းကိရိယာတွေထဲမှာ နောက်ဆုံးပေါ် ကွန်ပျူတာဓါတ်မှန် (CT)၊ သံလိုက်ဓါတ်မှန် (MRI) စက်များနဲ့ ဦးနှောက်၏ လျှပ်စစ်စွမ်းရည်ပြဂရပ်စက် (EEG) စက်တွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အထူးကုတွေဟာ အပျော့စား ခေါင်းကိုက်ခြင်းကနေ ဝက်ရူးပြန်ရောဂါကြောင့်တက်ခြင်း (epileptic seizures)၊ စိတ်ကစဉ့်ကလျားဖြစ်ခြင်း (dementia) ဒါမှမဟုတ် လေသင်တုန်းဖြတ်ခြင်း (Stroke) တွေအထိ အားလုံးကို ကုသပေးဖို့ အသင့်ပြင်ထားပါတယ်။ အစောပိုင်း ရောဂါရှာဖွေတဲ့အဆင့်ကနေ ပြန်လည်ထူထောင်လာဖို့ အထူးကြပ်မှုကုသတဲ့အဆင့်နဲ့ နောက်ပိုင်း ပြန်လည်စစ်ဆေးဖို့ လာပြတာတွေအထိ ကုသမှုအဆင့်တိုင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လူနာတွေကို အကူအညီတွေ ပေးလျှက်ရှိပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ဒါမှမဟုတ် တစ်ကိုယ်လုံးအားနည်းနေခြင်း၊ နာကျင်ခြင်း၊ ပုံမှန်မဟုတ်သော လှုပ်ရှားမှုများ၊ ပုံမှန်မဟုတ်သော ယာယီ အပြုအမူများ၊ မှတ်ဉာဏ်လျော့ခြင်း၊ သတိလစ်ခြင်း၊ စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ထုံကျင်ခြင်း၊ တရွရွဖြစ်ခြင်းစသည့် ရောဂါလက္ခဏာများကို ပြင်းထန်စွာ ဒါမှမဟုတ် တာရှည်စွာ ခံစားနေရတဲ့ လူနာတွေအတွက် ရောဂါစစ်ဆေးခြင်း၊ အဖြေထုတ်ခြင်း၊ ကုသမှုပေးခြင်းနဲ့ ကာကွယ်ခြင်း။
ဦးနှောက်နှင့် အာရုံကြောစနစ်ကို ပြန်လည်ပျိုးထောင်ခြင်း
သွေးယိုစီးခြင်းနှင့် တစ်ရှူးများသေဆုံးခြင်း နှစ်ခုလုံးအတွက် လေသင်တုန်းဆေးခန်း
ခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့် မျက်နှာပိုင်းနာကျင်ခြင်းအတွက် ဆေးခန်း
မူးမော်ခြင်းနှင့် သတိလစ်ခြင်း (syncope) အတွက် ဆေးခန်း
ပြင်းထန် နာကျင်ခြင်းနှင့် နာတာရှည် နာကျင်ခြင်းတို့အတွက် ဆေးခန်း
ပါကင်ဆွန် (Parkinson’s) ရောဂါကဲ့သို့ ရောဂါများအတွက် လှုပ်ရှားမှုပုံမမှန်ခြင်းဆိုင်ရာ ဆေးခန်း
စိတ်ကစဉ့်ကလျားဖြစ်ခြင်း (dementia) နှင့် အပြုအမူပုံမမှန်ခြင်းဆိုင်ရာ ဆေးခန်း
ဝက်ရူးပြန်ရောဂါ (Epilepsy) ဆေးခန်း
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပစ္စည်းကိရိယာများနဲ့ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ နည်းပညားများ
သံလိုက်ဓါတ်မှန် (MRI) စက်
ဦးနှောက်၏ လျှပ်စစ်စွမ်းရည်ပြဂရပ်စက် (EEG)
အိပ်ပျော်နေစဉ် ဦးနှောက်လှိုင်းများကို စောင့်ကြည့်ရန်အတွက် စက်ကိရိယာများ (Sleep Lab)
အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများဖြင့် ကိရိယာစုံတပ်ဆင်ထားသော ရောဂါစစ်ဆေးရေးအခန်းများ
နေ့စဉ် (တစ်ပတ်လျှင် ၇ ရက်) - ၀၇:၀၀ - ၂၀:၀၀
၆၆ (၀) ၂၃၇၈-၉၀၀၀ လိုင်းခွဲ ၂၄၁၀၃
တနင်္ဂနွေ-အင်္ဂါနှင့် ကြာသပတေး ၀၈.၀၀-၁၉.၀၀၊ ဗုဒ္ဓဟူး၊ သောကြာနှင့် စနေ ၀၈.၀၀-၂၀.၀၀
၆၆ (၀) ၃၈၃၂-၀၃၀၀ လိုင်းခွဲ ၁၂၅၁-၂
Hiran Phiphitthanaban, M.D.
Rawisara Lerdpaisarn, M.D.
Pathawee Sathapornwajana, M.D.
Patcharaporn Sakonpiboon, MD.